हरियो आँखा कसरी बनाउने - मलाई कुन रंगहरू मनपर्दछ? | बेजिया
हरियो आँखा कसरी बनाउने
सुसाना Godoy | 08/06/2021 14:00 | मेकअप
के तपाईंलाई हरियो आँखा बनाउन कसरी थाहा छ? तिनीहरू एक धेरै कामुक र भावुक देखिन्छन्। यो सत्य हो कि यस भित्र, हामी हरियो र variousका विभिन्न रंगहरू पनि फेला पार्न सक्छौं, तर अझै हामी तपाईंलाई उत्तम सल्लाहहरू दिन्छौं ताकि तपाईंको आँखा अझ तीव्र हुनेछ।
यदि तपाईंले देख्नुभयो कि तपाईंले प्रयास गर्नुभयो तर अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्नुभएन भने, हामी तपाईंलाई उत्तम विचारहरू दिनेछौं ताकि तपाईं आफ्नो दृश्यबाट अधिक लाभ लिन सक्नुहुनेछ। दिन, रातको सबै क्षणहरूको लागि मेकअप सधैं हाम्रो उत्तम सहयोगी हुन्छ र हामी के चाहन्छौं त्यसलाई गहिराइ दिन र हामी के लुक्दैनौं लुकाउन सहयोग पुर्‍याउन। व्यापारमा तल ओर्लौं!
1 कसरी हरियो आँखा मेकअप चरण-चरण गरेर गर्ने
2 हरियो आँखाका लागि के रंग eyeliner
3 हरियो आँखा छाया रंग
4 पार्टीको लागि कसरी हरियो आँखा बनाउने
कसरी हरियो आँखा मेकअप चरण-चरण गरेर गर्ने
आँखा मेकअप सधैं गर्न को लागी एक प्रक्रिया हो। तर यो सत्य हो कि यो हामी सपनाको रूपमा सधैं फिट हुँदैन। यस अवस्थामा, हामी तपाईंलाई चरण by चरणमा छोड्दै छौं जुन तपाईंलाई एकदम थोरै समय लिने छ, त्यसैले हामी काममा लागौं!
छालाको तयारी आवश्यक छ। त्यसकारण, तपाइँको अनुहार मा एक सानो मॉइस्चराइजर लागू गर्न सम्झनुहोस् र यसको पछि, तपाइँको छनौट आधार वा अवसरको लागि श्रृंगार। जब पलकको बारेमा कुरा गर्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँ केहि प्राइमरहरू छन् जुन छायाको लागि अधिक रंग र लामो समयसम्म समात्नका लागि उपयुक्त छन्।
अब तपाईंले गर्नु पर्छ समान छाया रंगको कम्तिमा दुई शेड छनौट गर्नुहोस्। सबैभन्दा हल्का हामी सम्पूर्ण मोबाइल पलकमा जान र राम्रोसँग मिल्नेछौं।
गाढा र With्गका साथ हामी यसलाई अधिक गहिराइ प्रदान गर्नेछौं आँखाको अन्तलाई जोड दिँदै त्यो मन्दिरतर्फ जान्छ र यसलाई पटको भागमा पनि प्रयोग गर्दै। तर हो, यस अन्तिम क्षेत्रमा हामी यसलाई धमिलो पार्नेछौं ताकि त्यहाँ कुनै लाइनहरू छैनन्।
हामी आँसुको नजीक जति पुग्छौं, रंग त्यति नै हल्का हुनेछ, त्यसैले हामी यो भन्छौं कि अन्य चरम मा अधिक तीव्र हुन।
जब तपाइँ छायाँ लागू गर्नुहुन्छ, यो समय भयो एक eyeliner को लागी अप्ट। यो पेन्सिल वा तरल हुन सक्छ र यसको साथ हामी माथिल्लो रेखा कोर्नेछौं, आँखाको नजीक नजिक।
आँसुको अंशमा हामी रोशनीको टच दिन्छौं। धेरै सानो, केवल एउटा सानो पोइन्ट ताकि हाम्रो आँखा दुई पटक उज्यालो भयो।
अन्तमा, थोरै मस्करा लगाए जस्तो केहि छैन आँखालाई अधिक मात्रा दिन।
हरियो आँखाका लागि के रंग eyeliner
एक eyeliner को रूप मा, तपाईं पहिले नै थाहा छ कि तपाईं यो एक पेन्सिल, तरल वा जेल को रूप मा दुबै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सत्य हो कि हामीले सँधै हाम्रो आरामको अनुसरण गर्नुपर्छ। जेलमा जे भए पनि हामी सँधै यसलाई ब्लर गर्नुपर्दछ ताकि यो यति चिह्नित नहोस्। तर त्यो सबैको स्वादमा छ। तपाइँ के गर्नुहुन्छ कि तपाइँ र youहरूसँग रहनुहुन्छ जुन हरियो आँखा कसरी बनाउने भनेर थाहा पाउन सबैभन्दा बाहिर खडा हुन्छ।
कालो रंगले यसलाई धेरै गहनता दिनेछ र यो उत्तम छ यदि तपाईंले 'धुँवा आँखा' लाई रोज्नु भएको छ भने। त्यो धुम्रपान गर्ने शैली जुन तपाईंको उत्तम रातहरू र महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको तारा बन्नेछ। जब तपाईं अधिक प्राकृतिकता चाहनुहुन्छ, तपाईं सँधै अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ हरियो आईलाइनर त्यो दृश्यमा जोड दिन्छ। अर्को एउटा eyeliner र colors जुन तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्न ब्राउन हो। ब्लूज वा खैरो टोनहरू सिफारिस गरिदैन।
हरियो आँखा छाया रंग
कसरी हरियो आँखाहरू बनाउन र केका छाया तिनीहरू लागि उपयुक्त छन्? निश्चय पनि एक भन्दा बढी अवसरहरूमा तपाईंले आफैलाई यो सोध्नुभएको छ, ठीक छ, हामी तपाईंलाई यो कुरा साँचो हो कि यो आँखाको रंगले विभिन्न र colors्ग र टोनको शेडहरू बोक्न सक्छ। तर हामी चाहान्छौं कि उहाँ अझ बढी चम्कोस् र त्यस कारणको लागि, केहि त्यस्तो छैन सुनौलो टोनहरू, जहाँ खैरो रंगहरू तपाईंको आँखाहरूका लागि उत्तम विचारहरू हुन्। तर पनि गुलाबी पनि सबैभन्दा उत्तम सहयोगी र बैजनी हो। तर यो सत्य हो कि उत्तरार्ध जहिले पनि सबैको ओठमा हुन्छ। यो एक उत्तम टोन होईन किनभने होईन तर यसलाई अधिक प्राकृतिक तरीकाले मिलाउन गाह्रो छ।
पार्टीको लागि कसरी हरियो आँखा बनाउने
तपाईं लागू गर्नुहुनेछ सबै पलकमा एक हल्का खैरो छाया.
तपाईं एक संग कन्ट्रास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ एबर्जिन र colorको छाया वा गाढा खैरो। यो आँखाको बाहिरी छेउमा जान्छ र यसको बीचमा जान्छ, यसलाई राम्रोसँग धमिलो पार्दै।
पलकको बीचबाट लिकरमल तिर, र the फेरि स्पष्ट हुन्छ। टिअर डक्टमा इलिमिनेटरको टचको साथ।
क्रीजलाई बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण पलकलाई राम्रोसँग मिसाउन सफा ब्रश दिनुहोस्।
गाढा छायाको साथ लाइन र मस्करा लागू गर्नुहोस्।
अब तपाईंलाई थाहा छ हरिया आँखा कसरी बनाउने ताकि तपाईं अर्को बैठकहरूमा यसलाई ध्यानमा राख्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » मेकअप » हरियो आँखा कसरी बनाउने
निलम्बन प्रशिक्षण को फाइदा
एउटा सानो भान्छामा भण्डारण अधिकतम बनाउन ricks तरिकाहरू